Imbali kunye noyilo lwee-Submarines
Imiklamo yamanzi angaphantsi kwamanzi okanye i-submarines ngomhla we-1500s kunye nemibono yokuhamba kwamanzi ngaphantsi kwamanzi. Nangona kunjalo, bekungekho kwiXesha le-19 ukuba iinqanawa zokuqala ezisetyenziswayo zaqala ukubonakala.
Ngexesha leMfazwe yombango , ii-Confederates zakha i-HL Hunley, i-yerwandle eyayihlalisa umkhombe we-Union. I-USS Housatonic yakhiwa ngo-1864. Kodwa bekungekho emva kokuba iMfazwe Yehlabathi I iqalile ukuba i-submarines yokuqala eyasebenza kunye neyenje yangoku yasungulwa.
Ingxaki yenkwenkwezi ihlale yindlela yokuphucula ukunyamezela nokusebenza kwayo ngaphantsi kwamanzi, kwaye zombini izikhono zichazwe yinqanawa. Imbali yokuqala kwimbali yamanzi yenkwenkwezi ingxaki yenkwenkwezi yayisoloko yindlela yokwenza umkhombe wakhe usebenze nonke.
IiPapyrus Reeds ezingenayo
Iingxelo zeembali zibonisa ukuba umntu uye wazama ukuhlola ubunzulu bomhlaba. Ingxelo yokuqala kwiNayile Valley eYiputa isinika umzekeliso wokuqala.
Umzobo wodonga obonisa abazingeli beenkumbi, iintambo zeentaka ezandleni, ezihamba ezintshontsheni zabo phantsi komhlaba njengoko ziphefumula ngentshontsho yeepyrus. Abantu baseAthene bathi basebenzise abahlukahlukeneyo ukuba basuse umnyango wokungena kwiiholide ngexesha lokuvinjelwa kweSirakuse.
UAlexandro Omkhulu , ekusebenzisaneni kwakhe neTire, wayala abantu ukuba bachithe nayiphi na imoto engenazixhobo (inqanawa) ukukhusela isixeko esinokuyenza. Nangona kungabikho kwile rekhodi ngaba oko kuthiwa uAlexandro wayenalo na uhlobo lwesithuthi esingenakufudumala, inqaku liye lathi wehla kwisixhobo esasigxina abahlali bayo kwaye bavuma ukukhanya.
UWilliam Bourne - 1578
Kuze kube ngu-1578 nawuphi na irekhodi ebonakalayo yecwecwe eyenzelwe ukuhamba ngaphantsi kwamanzi. UWilliam Bourne, owayekade ehlasele i-Royal Navy gunner, wayilungiselele isikebhe esasiqalile ngokupheleleyo esingaba ngaphantsi komhlaba. Indalo yakhe yayisisiseko somthi esiboshwe ngesikhumba esingenawo amanzi.
Kwakufuneka igxilwe ngokusebenzisa izibambo zesandla ukudibanisa amacala kunye nokunciphisa ivolumu.
Nangona ingcamango kaBourne ayizange ifike ngaphaya kwebhodi lokudweba, ifowuni efana nayo yasungulwa ngo-1605. Kodwa ayizange ifumaneke ngakumbi kuba abaqulunqi bebenqabile ukuqwalasela ukunyaniseka kwamatope angaphantsi kwamanzi.
I-craft yabanjwa phantsi komlambo ngexesha lovavanyo lokuqala lokuqala lwamanzi.
UKornelius Van Drebbel - 1620
Into enokuthiwa yinto yokuqala yokusebenza "yangokwenene" yasemanzini yayiyinqanawa ehlanganiswe ngesikhumba sokugcoba. Kwakuyimbono kaKornelius Van Drebbel, udokotela waseDutch ohlala eNgilani, ngowe-1620. Inqanawa yaseVan Drebbel yaxhaswa ngabaqhubi ababethelela kwiiyari ezazityhubela izikhumba zesikhumba eziguquguqukayo. Izibhabhu ze-Snorkel zomoya zagcinwa ngaphaya komphezulu ngokutshiza, ngaloo ndlela zivumela ixesha lokungena kweeyure eziliqela. Inqanawa yaseVanes Drebbel yenzeke ngempumelelo kwimigangatho eyi-12 ukuya kwe-15 ngaphantsi kweMlambo iThames.
UVan Drebbel walandela isikebhe sakhe sokuqala nabanye ababini. Iimodeli kamva zazikhulu kodwa zathembela kwimimiselo efanayo. Imbali ithi emva kokuvavanywa ngokuphindaphindiweyo, uKumkani James I waseNgilani wakhwela kwenye yeemodeli zakhe zangaphambili ukubonisa ukhuseleko. Nangona kukho imbonakalo eyimpumelelo, ukuveliswa kukaVan Drebbel kwahluleka ukuvuselela umdla weBritish Navy. Kwakuyiminyaka xa kwenzeka ukuba imfazwe yenkwenkwezi yayikude kwixesha elizayo.
Ngomnyaka we-1749 i-periodical yaseBrithani "I-Gentlemen's Magazine" yashicilela ibinzana elifutshane elichaza isixhobo esingaqhelekanga sokukhupha nokukhupha.
Ukuvelisa isiCwangciso saseNtaliyane esakhiwe nguGivanvan Borelli ngo-1680, le nqaku ibonisa isicatshulwa kunye nenani leebhokhwe zeebhokhwe ezakhiwe kwisikhuni. Iinqwelo zeebhokhwe nganye zaza kudibaniswa kwisithuba esiphantsi. UBorelli ucebe ukucwina le nqanawa ngokuzalisa izikhumba ngamanzi kwaye uphakamise ngokunyanzelisa amanzi ngaphandle kwentonga. Nangona inqanawa yaseBorelli yayingazange yakhiwe yanikezela ukuba yintoni eyona ndlela yokuqala kwi-ballast tank.
Qhubeka> I-Submarine ka-David Bushnell
I-submarine yokuqala yaseMelika indala njengase-United States ngokwayo. UDavid Bushnell (1742-1824), ophumelele kwiYale, wakha waza wakha i-submarine i-torpedo isikhephe ngo-1776. Umkhumbi womntu omnye wagxininiswa ngokuvuma amanzi ngaphakathi kwinqanawa kwaye wenziwa ngokupompa ngepompo yesandla. Ixhaswe yi-propeller eqhutywe ngetekisi kunye ne-keg ye powder, i-Turtle enemiqanda eyenza i-Revolutionary Americans inethemba elikhulu kwi-weapon eyimfihlo-isikhali esingazintshabalalisa iinqwelo zemfazwe zaseBrithani eziseNew York Harbor.
I-Turtle Submarine: Sebenzisa njengeSixhobo
I-torpedo ye-Turtle, i-keg ye powder, yayiza kufakelwa kwinqanawa leentloba zeentshaba kwaye ixhatshazwe ngexesha elithile. Ngobusuku bukaSeptemba 7, 1776, i-Turtle, eqhutyelwa yivolontiya yezempi, uSergeant Ezra Lee, yaqhuba ukuhlaselwa kwisikhululo se-British HMS Eagle. Nangona kunjalo, isisitye esityebileyo esasetyenziswa ngaphakathi ngaphakathi kwe-oak-pulank
Kungenzeka ukuba i-huni yokhuni yayinzima kakhulu ukungena, idivaysi ebophayo ibetha i-bolt okanye i-iron brace, okanye umqhubi wayephelelwe amandla ukukhangela isikhali. Xa uSergeant Lee azama ukutshintsha i-Turtle kwenye indawo phantsi kwesihlwele, akazange adibanise nesitya esijoliswe kuyo kwaye ekugqibeleni waphoqeleka ukushiya i-torpedo. Nangona i-torpedo yayingazange ifakwe kwisiqulatho, i-clockwork timer yayiyikhumbule malunga neyure emva kokuba ikhishwe.
Isiphumo sasiqhutywe ngokugqithisileyo ekugqibeleni sanyanzelisa abaseBrithani ukuba bandise ukunyamekela kwabo kwaye bathuthele iinqanawa zabo ekuqhubeni.
Iingxowa zeRoyal Navy kunye neengxelo ezivela kulo xesha azizange zikhankanywe ngalesi siganeko, kwaye kunokwenzeka ukuba ukuhlaselwa kweTurtle kungaba yinto engaphezulu kwesiganeko esingaphantsi kwesiganeko.
UDavid Bushnell Umfanekiso Omkhulu we-Turtle Submarine
UDavid Bushnell wakha inqanawa ekhethekileyo, ebizwa ngokuba yiTurtle, eyenzelwe ukuba iqhutywe ngaphantsi kwamanzi ngumsebenzisi ophendulela i-propeller yayo ngesandla.
I-Turtle yaseMelika kaDavid Bushnell
Umsebenzi kuphela, udidi olupheleleyo lwe-David Bushnell ye-1776 eyakhelwe, i-American Turtle.
UDavid Bushnell 1740-1826
Igalelo elincomekayo lomncedisi kunye nomqambi uDavide uDavid Bushnell kwi-American Revolutionary War umzamo wawuyinkwenkwezi yokuqala yokusebenza komhlaba.
Qhubeka> uRobert Fulton kunye noNautilus Submarine
Emva koko kwafika omnye waseMerika, uRobert Fulton, owathi ngo-1801 wakha ngokuphumelelayo kwaye wasebenzisana nenkwenkwezi yaseFransi, ngaphambi kokuba aguqule iitalente zakhe zokwenza i- steamboat .
URobert Fulton - Inqanawa yaseNautilus 1801
Inqanawa yase-Nautilus e-Robert Fulton yayigxininiswa yi-propeller ene-hand-cranked ngenkathi igxininiswe kwaye yayine-kite-like likeil for power surface. Inqanawa yaseNautilus yayiyinkqubo yokuqala yokuzimela ukuba ibe neendlela zokuzikhupha ezihlukeneyo zokusebenza kunye nokucinywa komhlaba.
Kwakhona zithwala iiflasks zomoya ophefumlelweyo owamvumela ukuba abasebenzi base-two bahlale bechithwa kwiiyure ezintlanu.
UWilliam Bauer - 1850
UWilliam Bauer, waseJamani, wakha iselwandle e-Kiel ngo-1850 kodwa wahlangabezana nempumelelo encinane. Isikebhe sokuqala saseBauer sanyuka ngamanzi angama-55. Njengoko ubugcisa bakhe bebukhenkceza, wavula iiguvane ezikhukula ukuze zilingane neengcinezelo ngaphakathi kwinqwelo-moya ukuze ivuliwe. UBauer kwafuneka akhombise abathunywa bamaborama abesabisayo ukuba le yindlela yokuphela yokusinda. Xa amanzi e-level level, amadoda adutshulwa phezulu kunye nombhobho omoya owawuvule i-hatch evulekile. Inkqubo elula yeBauer yafunyanwa kwakhona emva kweminyaka kwaye iqeshwe kwiinkampani zamanqanawa ezikhuselekileyo ezisetyenziswayo ngendlela efanayo.
Ngexesha leMfazwe yaseMerika , umqambi we-Confederate uHorace Lawson Hunley waphendulela umkhumbi we-boiler into yangasese.
Le nqanawa ebizwa ngokuba yi-Confederate iya kuthi iqhutywe ngamacandi amane ngesipoti esithwele ngesandla. Ngelishwa, inqanawa yagubha kabini ngexesha lezilingo eCharleston, eSouth Carolina. Ukucwiliswa ngengozi echwebeni laseCharleston kwindleko zobomi babasebenzi ababini. Kwimeko yesibini le nqanawa yayinomgca wezantsi kwaye uHorace Lawson Hunley ngokwakhe waxhatshazwa ngabanye abasebenzi abasibhozo.
Emva koko, i-yasemanzini yaphakanyiswa yaza yaqanjwa ngokuthi nguHunley. Ngo-1864, ephethe iipilenti ezingama-90 zepowder kwisigxina eside, u-Hunley wahlaselwa waza wawayeka i-USS Housatonic, ekungeneni kweCharleston Harbour. Emva kokuhlaselwa kwakhe ngempumelelo kwi-Housatonic, u-Hunley wanyamalala kwaye ukuphela kwakhe kwasala kungaziwayo iminyaka eyi-131.
Ngo-1995 ukuchithwa kwe-Hunley kwakukho iikhilomitha ezine ukusuka eSullivans Island, eSouth Carolina. Nangona wawa, u-Hunley wabonisa ukuba i-yowwandle yayingaba sisixhobo esibalulekileyo ngexesha lokulwa.
Biography - uHorace Lawson Hunley 1823-1863
UHorace Lawson Hunley wazalwa eSinner County, eTennessee, ngomhla wama-29 kuDisemba 1823. Njengomdala, wakhonza kwiLishayamthetho yaseburhulumenteni yaseLouisana, wayenomthetho eNew Orleans kwaye wayeyindawo ebonakalayo kuloo ndawo.
Ngo-1861, emva kokuqala kwemfazwe yaseMerika, uHorace Lawson Hunley wajoyina uJames R. McClintock noBaxter Watson ekwakheni i-marine Pioneer, eyayiqhutyelwa ngo-1862 ukukhusela ukuthathwa kwayo.
Kamva amadoda amathathu atyakha iinqanawa ezimbini kwi-Mobile, eAlabama, okwesibini apho kuthiwa nguHL Hunley. Le nqanawa yathathwa eCharleston, eMzantsi Carolina, ngo-1863, apho kwakufuneka isetyenziswe ukuhlasela iinqanawa zeNyunithi.
Ngethuba lokuditywa kweemvavanyo ngomhla we-15 Oktobha 1863, kunye noHorace Lawson Hunley ophetheyo, inqanawa yahluleka.
Bonke abo bebhodi, kuquka uHorace Lawson Hunley, balahlekelwa ubomi babo. Ngomhla we-17 kuFebruwari 1864, emva kokuba iphakanyisiwe, ihlaziywe kwaye yanikwa abasebenzi abatsha, uHL Hunley waba yinqanawa yokuqala yokuhlaselwa ngempumelelo imfazwe yemfazwe xa ewa USS Housatonic eCharleston.
Qhubeka> I-USS Holland neYohn Holland